अनौठो संसार Archives - Khabar Samachar
Home / अनौठो संसार
समुद्रको सतहमा भेटिएको यी ९ रहस्यमय कुराहरू ! जसलाई अहिले सम्म कसैले पनि यहि हो भनेर ब्याख्या विश्लेषण गर्न सकेको छैन हेर्नुहोस With About 71 percent of the Earth’s surface covered in water, it’s not surprising that some weird things are found from time to time. Here are9Bizarre …
स एन्जेलस, १६ असोज । अमेरिकी राज्य नेभादाको लस भेगासमा आइतबार राति भएको एक कन्सर्ट (सांगितिक प्रस्तुति) मा भएको गोलीकाण्डमा मारिनेहरुको संख्या ५८ पुगेको छ भने अरु ४०० जना घाइते भएका छन् । लस भेगासको मन्डालय बे होटलमा कन्सर्ट भइरहेको बेला गोली चलेको थियो । अन्धाधुन्ध भएको गोली हानाहानमा ५८ …
September 20, 2017	310
एजेन्सी । जब श्रीमान र श्रीमतीबीच सम्बन्धको कुरा आउँछ त त्यहाँ एउटा डोरी हुन्छ जसले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई बाँधेर राख्छ । तर दुबै जना मध्ये एउटाले पनि उल्लंघन गर्ने कोशिस गर्छन् भने कहिले काँही यसको नतिजा एकदम नराम्रो निस्कन सक्छ । यस्तै गरेकी छन् भारतको ग्वालियरमा बस्दै आएकी युवती सोनमले …
September 20, 2017	285
संसारमा आमा छोराको सम्बन्ध सबैभन्दा बढी पवित्र मानिन्छ ।नेपाल भारत लगायतका मुलुकमा आमालाई देवीको उपमा दिइन्छ र देवी भन्दा ठूली मानिन्छ । तर, मेक्सिकामा यस्ता भएको छ जसले सबैलाई अचम्ममा पारेको छ । त्यहाँ मारिया नामकी एक महिला आफ्नो छोरासँग विवाह गर्ने अडान राखेकी छन् । र उनका छोरा पिटर …
September 19, 2017	164
प्रश्नः– मेरो घर चितवन हो । नाम गोप्य राखिदिनु होला । मेरो एउटा जिज्ञासा छ जुन यसप्रकार छः मेरो श्रीमान् विदेशमा छन्, मलेसियामा । उनी घर फर्किदै छन् रे, उतैबाट अर्की श्रीमति लिएर । म अंश लिएर छुट्टीनु भन्दा उनी आउँदा अर्को पुरुष लिएर त्यहि घरमा बस्न पाउँछु की पाउँदिन …
September 16, 2017	101
काठमाडाैं । हामीले हेर्ने धेरै मुलधारका चलचित्रमा देखाइने सेक्स सिन झुठा हुन्छन् । तर, विश्व चलचित्र क्षेत्रमा केही यस्ता चलचित्र पनि छन्, जुन चलचित्रमा कलाकारहरुले स्क्रीनकै लागि भनेर साँच्चै सेक्स गरेका छन् । कलाकारहरुले रियल सेक्स गरेका चलचित्रहरु यौन कथा अथवा ब्लू फिल्म होइनन् । यी १२ चलचित्रहरु जसमा कलाकारहरुले …
September 12, 2017	117
काठमाडौं,२७ भदौ | बलिउड एक्ट्रेस सनी लियोनीले वेष्ट इण्डिजका विष्फोटक ब्याट्सम्यान क्रिस गेलको ‘च्यालेञ्ज’ स्वीकार गरेकी भन्ने खबर पछिल्लो समय निकै नै भाइरल भैरहेको छ |सनी लियोनीले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै क्रिस गेलले दिएको चुनौतीलाई स्वीकार गरेको बताएकी छिन् | केही दिनअघि गेलले सनी लियोनीको गीत ‘लैला मै लैला…’मा डान्स …
यी हुन् चल्दै गरेको बसभित्रै सेक्स गर्ने नेता, बाहिर आयो भिडियो
September 5, 2017	80
चन्द्रपुर। भारतको महाराष्ट्रमा चलिरहेको बसभित्रै महिला र पुरुषको एक जोडीले सेक्स गरेको भिडियो भइरल भएको छ । भिडियोमा सत्ताधारी दल बिजेपीका नेताले युवतीसँग सेक्स गरेको दृश्य देख्न पाइन्छ । ती युवतीले आफूलाई बिजेपी नेताले जागिर लगाइदिने तथा पछि विवाह गर्ने प्रलोभनमा पारेर बसभित्रै सेक्स गरेको स्वीकार गरेकी छिन् । महाराष्ट्रको …
आयो यस्तो अनौठो तथ्य, पृथ्वीका सबै मानिसलाई माकुराले एक वर्षमै खाइदिन सक्छ
September 3, 2017	89
विश्वका सबै ठाउँमा पाइने जीवमध्ये माकुरा एक हो । हाम्रो वरिपरि जताततै माकुरा हुन्छन् । केही ठूला प्रजातीका हुन्छन्, केही साना । प्रजातीअनुसार माकुराले खानो आहार फरक हुन्छ । तर माकुराको भोक भने अनौठो हुने गर्छ । केही ठूला प्रजातिका माकुराले छेपारो, चरा र सानातिना स्तनधारी जनावर पनि खाने गरेको …
हाल इन्टरनेटमा भाइरल भैरहेको यो एक जोडीको तस्बिर, वास्तवमा को रहेछन उनीहरु ?
मुम्बई, १७ भदौ । हिजो आज सोसियल मिडियामा एक अत्यन्तै कालो वर्णको केटा र राम्री सेतोवर्णको केटीको फोटो भाइरल भैरहेको छ । फेसबुकमा मात्र हैन यी दुइको फोटो ट्वीटर, व्ह्वाट्सएप मा पनि उत्तिकै भाइरल भैरहेको छ । यो जोडीको फोटोलाई लिएर धेरै मानिसहरुले खिल्ली उडाइरहेका छन, उनीहरुको जोडी पटक्कै नमिलेको …